Naqshadeynta PCB, Teknolojiyada PCB, Guddiga Wareegga - Pandawill
Wax soo saarka iyo horumarka
WAAN KU DUUBNAA
Ku sax saxda marxaladda naqshadeynta
Pandawill waxay bixisaa taageerada nashqadeynta PCB kaliya ma ahan qeexida waxa aan u baahanahay, laakiin sidoo kale waxaan ku sameyno naqshadeyntaada laga bilaabo helitaanka xogta illaa alaabada la dhammeeyay. Naqshadda PCB waxaa ka mid ah: Xawaare Sare, Analog, Dijital-analog Hybrid, Cufnaanta Sare / Danab / Awood, RF, Backplane, ATE, Guddi Jilicsan, Guddiga Adag-Flex, Guddiga Aluminium iwm
Multilayer, HDI, leexo deg deg ah
Pandawill Circuits waxay soosaartaa oo ay siisaa noocyo badan oo tayo sare leh teknolojiyada guddiga wareegga daabacan, mugga, qiimaha iyo soosaarista xulashooyinka hogaaminta waqtiga ee ku saleysan fahamkeenna aasaasiga ah ee PCB iyo habka isku imaatinka iyo shuruudahaaga.
Tayada Sahayda, Dabacsanaanta Bixinta, Kharashka Maareynta
Iyada oo leh koox wax soo iibsata oo khibrad iyo khibrad leh, waxaan leenahay khibrad aan ku aqoonsan karno ikhtiyaarrada soo saarista iyadoo lagu saleynayo baahiyaha gaarka ah ee badeecad kasta iyo macaamiil iyo bixinta qaybo la filaayo in la helo, kala-beddelka gaarsiinta, dhimista kharashka iyo xitaa maamulka saamiyada.
Laga soo bilaabo tijaabinta illaa soosaarka ballaaran
Iyada oo loo marayo labada dalool (THT) iyo dusha sare (SMT) awoodaha wadajirka, labadaba hogaaminaya iyo RoHS u hoggaansanaanta la heli karo, adeegyadeena PCBA waxay ka kooban yihiin nooc nooc ah illaa soosaarka joogtada ah ee isku imaatinada kombuyuutarrada teknolojiyadda badan ee hoose iyo kuwa dhexe.
GUDDOOD GOLE & GOLAHA FARSAMADA
Kuu taageeri doonaa A ilaa Z
Marka lagu daro adeegga isku-darka PCB, waxaan bixinnaa sanduuqa dhismaha isku-dhafka is-dhexgalka ee nidaamyada hoose iyo modules iyo sidoo kale is-dhexgalka wax soo saarka buuxa. Iyada oo loo marayo shabakadeena alaab-qeybiyeyaasha doorbidaya, waxaan kaa taageernaa A ilaa Z, laga soo xigtay oraahda illaa heerka wax soo saar ballaaran ee mashruucaaga.